घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब एसएमएसबाटै जानकारी – नेपाली सूर्य
January 25, 2018 January 25, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब एसएमएसबाटै जानकारी
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन इजाजतसम्वन्धी सेवाग्राहीको सूचना मोबाइल सन्देश (एसएमएस)बाटै दिन थालेको छ ।
ट्रिपरले लियो जेब्राक्रसमै ज्यान, जानकीनगरमा तनाव
आन्दोलन झनै चर्कदै : धनकुटामा दोश्रो दिन पनि कर्फ्यू जारी, ४ दिनदेखि बन्द दाङ असमान्य बन्दै
November 28, 2017 Nepali Surya